ဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန်	6
Posted by ဇီဇီ on Jan 4, 2017 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Society & Lifestyle |6comments
လွယ်တယ်။ ဘီယာနဲ့စပ်တာမို့ အကြိုက်တွေ့ပြီး လာပြောပြတာ။
၁) ပုဇွန်တွေကို အမြီးချန်ပြီး ခေါင်းခွံခွါ၊ ကိုယ်ထည်ခွါ၊ ကျောခွဲချေးကြောင်းထုတ်၊ လက်တွေညှပ်ထားပြီး ငရုတ်ကောင်းနည်းနည်းနဲ့ ဆားနယ်ထား
၂) ပန်းကန်လုံးထဲ ကြက်ဥ၊ ဘီယာ၊ ဂျုံမှုန့်ထည့်ပြီး ခပ်ပြစ်ပြစ်ဖျော်ထား
၃) နောက် ပန်းကန်လုံးထဲ Bread crumbs နဲ့ coconut flakes ကို ဆတူရောထားး
၅) ဆီအိုးတည်ပြီး ဆီပူချိန်မှာ ပုဇွန်တစ်ကောင်ချင်းဆီကို အနှစ်ထဲနှစ် ပြီးရင် အမှုန့်ထဲ နှစ်ပြီး ဆီထဲ တစ်ကောင်ချင်းထည့်ကြော်တာပဲ။
၆) အချဉ်ကတော့ သန်ရာသန်ရာ အချဉ်နဲ့သာ တို့စားပေါ့။ ငိငိ။
Thint Aye Yeik says: ဖျားပွဲဈေးမှာရောင်းတဲ့ ပုစွန်ခွက်ကျော်ကမှ လွယ်အုန်းမယ်။ ပုစွန်ခွက်ကျော်ကို အချဉ်ရေ ချဉ်စပ်ကလေးနဲ့ တို့တို့ပြီး ဖျားပွဲဈေးတန်းမှာ စားရတဲ့ အရသာက ဖွေးဖွေးကို အချဉ်ရေနဲ့ တို့တို့ပြီး စားရတာထက်တောင် ကောင်းသေး။ ဟင်
အနော် ဘာတွေ ဝင်ပြောနေပါလိမ့်!
ဇီဇီ says: ဝယ်စားရဒါတော့ အလွယ်ဆုံးပေါ့။
ဒီမှာမရှိလို့သာ ဝယ်မရလို့ ချက်စားနေရတာ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: စားလို့အရသာရှိမဲ့ပုံပဲ
၀ီ လေးနဲ့မြည်းလိုက်ချင်ထှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ဇီဇီ says: လုပ်စားကျိ မိုက်မိုက်
manawphyulay says: အဲဒီတော့ ဘယ်လိုအရသာက ပိုကေင်းလာလဲ… ဟီး လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်….
ဇီဇီ says: ကောင်းတယ်။